माल्टामा के हेर्ने, यूरोपमा गन्तव्य यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | माल्टा, के हेर्ने
माल्टा यो एक टापु हो जसको रणनीतिक स्थानले यसको लामो इतिहासमा एक भन्दा बढि टाउको ल्याएको छ, किनकि यो धेरै राष्ट्रहरूले विवाद गरेको छ। तर १ 60 s० को दशकदेखि यो एक हो स्वतन्त्र गणतन्त्र जसमा करीव आधा मिलियन मानिस बस्छन्।
स्पष्ट रूपमा, त्यो त्यो घटनात्मक ईतिहासको कारणले छ सांस्कृतिक र वास्तुकला खजाना प्रशस्त छन् र एक भएको छ पर्यटन गन्तव्य के विचार गर्नुपर्छ। के तपाईंलाई केही दिनको लागि माल्टा यात्रा गर्ने विचार मनपर्छ? यी डाटा लेख्नुहोस्।
2 माल्टामा के हेर्ने
त्यहाँ बसोबास गर्ने तीनवटा टापुहरू छन्, माल्टा, गोजो र कोमिनो र सबै कुरा राजधानीमा केन्द्रित छ, Valletta जुन पहिलो टापुमा अवस्थित छ। यस सurb्कटमय विगतमा सिसिलियन, अर्गोनियन, अर्डरल अफ द हस्पिटलर नाइट्स र अर्डर अफ माल्टा, ओटोम्यान, नेपोलियन र स्पष्टतः बेलायतीहरूको अध्याय रहेको छ, जसले अन्ततः XIX मा फ्रान्सेली पराजय पछि टापुमा रहे। शताब्दी।
सन् १ 1964 .XNUMX मा अ independence्ग्रेजीबाट स्वतन्त्रता पाउनुभयो र जब सेनाहरू पछि हटे, यो टापुको लामो इतिहासमा यो पहिलो पटक थियो कि यसमा कुनै विदेशी सैन्य उपस्थिति थिएन। त्यस दिनदेखि मार्च 31१, स्वतन्त्रता दिवस हो।
माल्टामा के हेर्ने
con सात हजार वर्षको इतिहास त्यहाँ हेर्नको लागि धेरै छ। हुनसक्छ एकल लेख हाम्रो लागि सब थोरै छ सबै कुरा को लागी हामी केवल यो केहि आकर्षण मा केन्द्रित हुनेछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ Valeletta को अपने दर्शनीय यात्रा शुरू, तपाइँ यी संग्रहालयहरु याद गर्न सक्नुहुन्न:
आर्किलोजिक संग्रहालय: टापुहरूको पुरानो समयलाई भिज्न यो उत्तम स्थान हो। यहाँ तपाईं लास्करिस वार रूमहरूलाई याद गर्न सक्नुहुन्न, सेन्ट जोन अफ आर्डर अफ नाइट्स अफ सेन्ट जोनका दासहरूले ढु the्गामा खोदिएका कोषहरू जुन दोस्रो विश्वयुद्धमा अलाइजको मुख्यालयको रूपमा कार्यरत थियो। यहाँबाट आइसेनहावरले सिसिलीको ''43' मा सफल आक्रमणको आदेश दिए। त्यहाँ नक्सा, पुरानो फोन, र अधिक हो। प्रवेशद्वारको लागत १० यूरो छ।
युद्ध संग्रहालय: यो रमणीय ठाउँमा काम गर्दछ, सैन एल्मोको फोर्ट। आइतवारको दिन यहाँ पुरानो कपडाको रंगीन सैन्य परेड हुन्छ।
ललित कला को राष्ट्रीय संग्रहालय: यो एक सुन्दर ग्यालरी हो जुन १ an औं शताब्दीको सबै कामका साथ एक सुन्दर रोकोको दरबारमा काम गर्दछ।
भव्य मास्टरको दरबार- यो सेन्ट जोन को नाइटर्स को अर्डर को आधार को रूप मा सेवा गर्दछ र १ 1798 औं शताब्दी को पछि बाट। यो आदेश १ap 10 in मा नेपोलियनले निष्कासित गरे र भवन विलासी छ किनकि ग्रान्ड मास्टर लगभग एक राजकुमार थिए। आज यसमा संसद र माल्टिज राष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको छ। तपाईं पुरानो शस्त्रागारको माध्यमबाट हिड्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि। दरबारको प्रवेशद्वारको लागी १० यूरो लाग्छ र यदि यो बन्द छ र घुसाउने ठाउँ खुला छ भने मात्रeयूरो लाग्छ।
सेन्ट पलको Catacombs: तिनीहरू क्रिश्चियन हुन् - बाइजान्टिन क्याटाकम्बहरू जुन पुरानो रोमन राजधानी माल्टाको पुरानो पर्खाल बाहिर छ, जुन अहिले मोडिना हो। यो केही गोलाकार टेबुलहरूसहित कडा चट्टानमा खोदिएको सुरु। र चिहानहरूको भूलभुलैया हो, जुन त्यहाँ अन्त्येष्टि संस्कार गरिएको थियो। त्यहाँ फोनिसियन चिहानहरू पनि छन्। शीतल। प्रवेशद्वारको मूल्य १ 14 यूरो छ।
स्यान जुआनको क्याथेड्रल: यो माल्टा को अर्डर अफ नाइट्स को मुख्य चर्च थियो। यो एक सुरुचिपूर्ण बारोक भवन हो, तर एउटै आर्किटेक्टले कडा शैलीले डिजाइन गरेको हो जसले भालेटाको किल्ला आकार दिए। तर यसको भित्र यो सुन्दर छ, जहाँ संगमरमर र सुन सबै संग। एक अडियो गाईड उपलब्ध छ र काराभागीओद्वारा दुई सुन्दर कामहरू। प्रवेश शुल्क १० यूरो लाग्छ तर यदि तपाई सामूहिक रूपमा जानुहुन्छ भने यो सित्तै हुन्छ।
रोक्का पिकोला हाउस: यो एक महान माल्टीज परिवारको एक सुन्दर हवेली हो। यस दरबारमा फर्नीचर र कलाका कार्यहरू प्रशस्त छन्, तर त्यहाँ दोस्रो बमबाट बम आश्रय पनि छ जुन चट्टानबाट खोल्दछ र यसको आफ्नै खोलाको साथ। भ्रमणहरू केवल टुर द्वारा हुन्छन् र अ English्ग्रेजीमा र अन्तिम एक घण्टामा। केहि टुरहरू मार्क्विस आफैंले प्रदान गर्छन्। मूल्यeयूरो हो।
यी गन्तव्यहरू पछाडि, म सँधै आश्चर्यचकित भएको छु माल्टा टापुको पुरानो इतिहास, एक कि एक मन्नजद्रा र हागारको प्रागैतिहासिक मन्दिरहरूउदाहरण को लागी आज, अन्य साइटहरूको साथसाथै, उनीहरू विचार गरिन्छ विश्व सम्पदा साइटहरू।
यी दुई मन्दिरहरू निर्माण भएको अनुमान गरिएको छ 3600 2500०० र २XNUMX०० ईसापूर्व बीच त्यसैले तिनीहरू Stonehenge भन्दा धेरै पुराना छन्, उदाहरण को लागी, र एक हजार गुणा बढी परिष्कृत। तिनीहरूसँग छत, धेरै कोठाहरू, विशाल पोर्टलहरू, ढु furniture्गाका फर्नीचरहरू छन्। यी दुई मन्दिरहरू छुटाउन सकिँदैन। मन्नजद्रमा एक अर्को छेउमा तीनवटा मन्दिरहरू छन् र हागार असामान्य छ। भाग्यवश त्यहाँ एक आगन्तुक केन्द्र छ कि अडियो गाइड प्रदान गर्दछ। सामान्यतया तिनीहरू बिहान9देखि साँझ5सम्म खुल्छन् र प्रवेश १० यूरो छ।
अर्को प्रागैतिहासिक मन्दिर छ Tarxienआजकल अधिक आधुनिक भवनहरूको बीचमा लुकेको छ (शान्त भूभागको मध्यमा रहेका विगत दुई जस्तो होइन)। टार्क्सियनका चारवटा मन्दिरहरू छन् तर एउटा दक्षिणमा अवस्थित एउटा मन्दिर हो जुन अत्यन्त सुन्दर ढ decorated्गले सजाइएको छ र सबैभन्दा प्रभावकारी नक्काशी गरिएको छ जुन आज नेशनल म्यूजियम पुरातत्वमा प्रदर्शन गरिएको छ। यो मन्दिर परिसर हो जुन अर्को शानदार साइटको नजिक छ: यो Hal Saflieni Hypogeum.
Hypogeum एक शानदार साइट हो:aभूमिगत जटिल जुन पहिले अभयारण्यको रूपमा र पछि नेक्रोपोलिसको रूपमा सेवा गरीन्छ। यो दुर्घटनावश २० औं शताब्दीको सुरूमा पत्ता लागेको थियो र यसका तीन स्तरहरू धेरै परिष्कृत ढु stone्गाहरूका साथ छन्। वास्तवमा, कलमा ओरेकल हल इको शानदार छ। प्रति दिन 80० जना मानिसहरूलाई मात्र अनुमति छ, त्यसैले तपाईंले यात्रा गर्नु अघि बुक गर्नु पर्छ।
अन्तमा मलाई याद छ, एउटा बच्चाको रूपमा म कसरी पुरानो अन्तरिक्ष यात्री सिद्धान्तका स्वीस अग्रदूत एरिक भोन डानिकेनले माल्टा र यसको रहस्यका बारे सोधेका प्रश्नहरू सुनेर म छक्क परें। कुरा यो हो सम्पूर्ण माल्टामा अनौंठो लाइनहरू छन्, सयौं, हजारौं लाइनहरू समानांतर नक्साका साथ कडा ढु floor्गा फ्लोर बाहिर कुनामा। केहि समुद्र भित्र, पानीको मुनि भित्र जान्छन्।
त्यहाँ धेरै छन् Misrah आईएल-कबीर, माल्टा को प्रागैतिहासिक चट्टान, र प्रकृतिमा रहस्यमय छन्। औसत तिनीहरू १ 15 सेन्टिमिटर गहिरो छन् तर केहि 60० मा पुग्छन् र समानान्तर रेखा बीचको चौडाइ कहिलेकाँही १ 140० सेन्टीमिटर हुन्छ। तिनीहरू धेरै, धेरै दुर्लभ छन् र कसैले पनि तिनीहरूलाई निश्चित रूपमा व्याख्या गर्न सकेको छैन।
ठिक छ, यदि तपाईं माल्टामा जानुहुन्छ, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले धेरै गर्नुपर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » माल्टा » युरोपमा माल्टा, गन्तव्यमा के हेर्ने
तालिका पत्ता लगाउँदै